Izindaba - Usuke wabamba iqhaza kwi-CMEF 2020?
I-19/10/2020 kube ukuvulwa okukhulu kwe-83rd China International Medical Equipment Fair (CMEF) kanye ne-30th International Component Manufacturing & Design Show (ICMD) eShanghai National Exhibition Center.
Inani elikhulu lamabhizinisi asekhaya amahle kakhulu abambe iqhaza kule micimbi emibili engakaze ibonwe.
Ngemuva kwamashumi eminyaka wokuqongelela nemvula, i-CMEF ne-ICMD sekwenziwe kwaba yipulatifomu yomhlaba wonke ehola phambili yomhlaba wonke ehlanganisa lonke uchungechunge lwezimboni lwamadivayisi ezokwelapha, ukuhlanganisa ubuchwepheshe bomkhiqizo, ukwethulwa komkhiqizo omusha, ukuhweba ngokuthengwa kwempahla, ukusebenzisana kocwaningo lwesayensi, njll. ukubonisa ubuchwepheshe bamuva emkhakheni wezokukhiqiza idivayisi yezokwelapha, nokukhuthaza ukusebenzisana kochungechunge jikelele lwezimboni lwamadivayisi ezokwelapha.
Kubikwa ukuthi umbukiso wezinsuku ezine ubunamahholo ayisishiyagalombili, ahlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-220000. Izingqungquthela nezithangami ezingama-60 zezifundo, abaholi bezimboni abangaphezu kwama-300 kanye nokwethulwa kwemikhiqizo emisha engaphezu kuka-1500 kusiletha ukuthi sibuke ubuchwepheshe obunqenqemeni.
Njengomholi embonini yezokwelapha, inkampani yethu i-Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co, Ltd.
Ikhombise idokodo layo x38 eHholo 1.1 ebelikhombisa kakhulu izinhlobo ezahlukahlukene zepayipi le-urinary, i-laryngeal mask airway, i-endotracheal tube, i-gastric tube, izinto zokuvimbela ubhadane neminye imikhiqizo.
Zonke zakhiwe futhi zenziwa inkampani yethu.
Kukhona ukugeleza okuqhubekayo kwabathengi / izivakashi abakhombise intshisekelo enkulu kwimikhiqizo yethu futhi babheke phambili ekubambisaneni.
Ngo-2020 ubhadane lweCorvid-19 lwaletha umhlaba inhlekelele yomhlaba, kusilethele izinselelo namathuba. Njengelungu leqembu lempi yokulwa nalolubhadane, uHaiyan Kangyuan Medical Instrument Co, Ltd. kumele kube owokuqala ukuthwala ubunzima besifo esiwumshayabhuqe, anikeze ukwesekwa okwanele kwezinto zokwakha, agxile emisha nasekuqhamukeni, futhi alwele ukwenza iminikelo eminingi empini elwa nalomqedazwe.
Ngokuzayo, uKangyuan ngeke akhohlwe inhloso yakhe yasekuqaleni, aqhubekele phambili, ahlole umkhombandlela omusha wezinto ezintsha embonini yedivayisi yezokwelapha yaseChina, futhi alethe ushintsho olunzulu embonini yezokwelapha neyezempilo.
Isikhumbuzo esifudumele: ngokusho kwezidingo zomqedazwe zokuvimbela umsebenzi, ngaphambi kokungena ehholo lombukiso, zonke izivakashi kufanele zigqoke izifihla-buso, zikhombise omazisi bazo abasebenza kahle, kanye ne-Shanghai Health Code yabo e-Alipay noma e-WeChat.